Sanadguurada ololaha dumarka Sacuudiga - BBC News Somali
Sanadguurada ololaha dumarka Sacuudiga
Image caption Dumarka sacuudiga ayaa sanado badan u ololaynaya inay wadaan gaariga.
Ololaha loogu jiro in haweenku ay baabuurta kexeeyaan waddanka Sacuudi Careebiya waxaa uu soo bilawday labaatan sano kahor.
Laakiin waxaa nolol cusub geliyay muddaharaadkii dhacay muddo haatan sanad laga joogo. Tirada haweenka iyo ragga ka qayb galay muddaharaadkii waqtigaas way ka badnayd inta ay hadda rajeynayeen dadka dhaqdhaqaaqan wada kaddib markii ay dowladdu ka digtay ka qayb galka muddaharaadka sanadkan, hase ahaatee arrintani waxay heshay warbaahin aad u ballaaran.
Sanadkan waxay ahayd mid aan qaylo badan lahayn. Dadka dhaqdhaqaaqa wada waxay BBC-da u sheegeen in arrintu si wanaagsan ugu socoto iyo in markan ay tahay mid astaan ahaan loo muujinayo iyo wacyi gelin halkii muddaharaadyo waaweyn laga dhigi lahaa.
Mid ka mid ah wargeysyada Sacuudiga ka soo baxa xataa waxaaba uu qoray in muddaharaadka la baajiyay, laakiin dadkii hawshaas waday taas way beeniyeen, iyagoo sheegaya inay dadkii ka qayb geli lahaa u sheegeen oo keliya inaysan ka hor iman awaamiirta wasaaradda arrimaha gudaha.
Sanadkii hore, calaamaduhu waxay ahaayeen kuwo aad isugu qasan, iyadoo uu jiray dareen ah in mas'uuliyiinta oo dhami aanay arrinta ka soo wada horjeedin.
Qof ka mid ah dadkii sanadkii hore hawshan aadka ugu dhowaa waxaa uu BBC u sheegay in hadda uu jiro jawi aad looga baqayo. Iyadoo mas'uuliyiinta Sacuudigu ay wadaan dadaal ay ku sii xoojinayaan, sidii ay cabburin lahaayeen dhibaatooyinka uga imanaya kooxaha jihaad doonka ah amaba dadkooda shiicada ah ee laga badan yahay, si aanu u dhicin kacdoon dadweyne oo xagga dhaqanka ama bulshada ku saleysan.